40KM 40G QSFP + Abakhiqizi | I-China 40KM 40G QSFP + Ifektri nabahlinzeki
I-40KM 40G QSFP Module Ebonakalayo
I- HUAQ40E iyimodyuli ye-transceiver eyenzelwe izinhlelo zokuxhumana ezingama-40Km optical. Idizayini ihambisana ne-40GBASE-ER4 yezinga elijwayelekile le-IEEE P802.3ba. Imodyuli iguqula iziteshi zokufaka ezi-4 (ch) zedatha kagesi engu-10Gb / s ibe amasiginali we-4 CWDM optical, bese iziphindaphinda zibe yisiteshi esisodwa sokudluliswa kwe-40Gb / s optical. Ngokuphambene nalokho, ngasohlangothini lomamukeli, imodyuli ikhetha okokufaka okungama-40Gb / s kumasiginali eziteshi ze-4 CWDM, bese ibaguqula babe yimininingwane kagesi ekhipha isiteshi esingu-4.
Amaza amaphakathi eziteshi ze-4 CWDM angama-1271, 1291, 1311 no-1331 nm njengamalungu egridi yamaza we-CWDM echazwe ku-ITU-T G694.2. Iqukethe isixhumi se-duplex LC esibonakalayo se-optical kanye nesixhumi se-pin-38 se-interface kagesi. Ukunciphisa ukusabalalisa okubonakalayo ohlelweni lokudonsa isikhathi eside, i-single-mode fiber (SMF) kufanele isetshenziswe kule module.
Umkhiqizo wakhelwe ngefomu factor, uxhumano lwe-optical / kagesi kanye ne-interface yokuxilonga yedijithali ngokuya nge-QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Idizayinelwe ukuhlangabezana nezimo zokusebenza zangaphandle ezinzima kakhulu kufaka phakathi izinga lokushisa, umswakama kanye ne-EMIinterference.
Imodyuli isebenza kusuka ekunikezelweni kwamandla okukodwa okungu-3.3V kanye namasiginali wokulawula womhlaba wonke we-LVCMOS / LVTTL njengeModule Present, Setha kabusha, Ukuphazanyiswa kanye Nemodi Yamandla Ephansi ayatholakala ngamamojula. Isixhumi esibonakalayo esiyi-2-wire serial siyatholakala ukuthumela nokwamukela amasiginali wokulawula ayinkimbinkimbi nokuthola imininingwane yokuxilonga yedijithali. Iziteshi zomuntu ngamunye zingabhekiswa futhi iziteshi ezingasetshenziswanga zingavalwa ukuze kube nokuguquguquka okuphezulu komklamo.
Lo mkhiqizo uguqula idatha yokufaka kagesi engu-4-channel 10Gb / s ibe amasiginali we-CWDM optical (light), ngohlu lwe-4-wavelength Distributed Feedback Laser (DFB) oluqhutshwa. Ukukhanya kuhlanganiswe izingxenye ze-MUX njengedatha ye-40Gb / s, kusakazeka ngaphandle kwemodyuli yokudlulisela kusuka ku-SMF. Imodyuli yokwamukela yamukela okokufaka kwamasiginali we-40Gb / s CWDM, futhi iyiphindaphinda ibe iziteshi ezi-4 ngazinye ze-10Gb / s ezinobude obude obuhlukile. Ilambu ngalinye le-wavelength liqoqwa yi-discrete avalanche photodiode (APD), bese likhishwa njengedatha kagesi ngemuva kokukhuliswa okokuqala yi-TIA bese kuba yi-post amplifier.
I- HUAQ40E yakhelwe ngefomu factor, uxhumano lwe-optical / kagesi kanye nesixhumi esibonakalayo sedijithali ngokuya nge-QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Idizayinelwe ukuhlangabezana nezimo zokusebenza zangaphandle ezinzima kakhulu kufaka phakathi ukuphazamiseka kwamazinga okushisa, umswakama kanye ne-EMI. Imodyuli inikeza ukusebenza okuphezulu kakhulu nokuhlanganiswa kwesici, okufinyeleleka nge-interface enezintambo ezimbili.
Intengo ye-Huawei Olt, Transmitter Wangaphandle Transmitter, I-Xfp Transceiver, IHuawei Qsfp +, Optical Fibre Module, I-Sfp C ++,